Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » dhaqanka » Bandhigga Filimka Dalxiiska Caalamiga ah wuxuu bilaabmayaa Oktoobar 21
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Nederland • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Uganda War Deg Deg Ah • Wararka kala duwan
Bandhigga Filimka Dalxiiska Caalamiga ah ayaa furmaya Oktoobar 21
GTFF, oo ah Bandhig Faneedkii Dalxiiska ee ugu horreeyey ee reer guuraaga ah ayaa la soo saaray si loogu qabto taageeridda meelaha dalxiiska iyo dhaqaalaha maxalliga ah ee ku tiirsan dalxiiska.
GTFF waxaa soo saaray dalxiisayaasha Kanada iyo Mareykanka iyo hoggaamiyeyaasha warshadaha filimada.
GTFF waxay aqoonsan tahay filim sameeyayaasha caalamiga ah iyo wax-soo-saarka maqalka-maqalka ah kuwaas oo aasaas ahaan is-dhexgalinaya oo hormarinaya wacyigelinta caga-dhigista adduunka.
Qayb ka mid ah dakhliga GTFF waxaa lala wadaagi doonaa aasaaska firfircoon ee diyaar u ah inay u doodaan mabaadi'da dalxiiska ee waarta.
Bandhig Faneedka Dalxiiska Caalamiga ah (GTFF) waa Bandhig Faneedka Dhulka oo soo bandhiga filimaan kuwaas oo awood u leh inay kor u qaadaan wacyiga ku aaddan doorka muhiimka ah ee meelaha ay ka ciyaaraan guusha filimada iyo telefishanka. GTFF, oo ah Bandhig Faneedkii Dalxiiska ee ugu horreeyey ee reer guuraaga ah ayaa la soo saaray si loogu qabto taageeridda meelaha dalxiiska iyo dhaqaalaha maxalliga ah ee ku tiirsan dalxiiska.
GTFF wuxuu aqoonsadaa filim sameeyayaasha caalamiga ah iyo wax-soo-saarka maqalka-maqalka ah oo aasaas ahaan is-dhexgeliya oo hormariya wacyigelinta caga-dhigista adduunka. Waxaa watay bayaan hawlgal oo xoog leh, hawlaha GTFF waxaa ka mid ah aqoon isweydaarsiyada warshadaha filimada iyo sidoo kale siminaaro sahaminaya dalxiiska waara; ku dhiirrigeliya dhagaystayaasha inay qaadaan tallaabooyin ilaalin oo togan.
2021 GTFF Virtual Edition waxaa lagu soo saaray iyadoo lala kaashanayo iyo taageerada Dalxiiska Netherlands.
Himilada Bandhigga Filimka Dalxiiska Caalamiga ah waa:
Si loo aqoonsado loona abaal mariyo filim sameeyayaasha dalxiiska ee hibada leh.
Si aad u soo bandhigto filimada dadweynaha iyo wax -soo -saarka ku saabsan meelaha loo dalxiis tago iyo badeecadaha.
Si kor loogu qaado isbeddellada ugu dambeeyay ee samaynta filimka dalxiiska.
Si aad u leexiso xiisaha ganacsiga dalxiiska iyo shirkadaha wax -soo -saarka dhinaca wax soo saarka filimada dalxiiska.
Si loogu dhiirrigeliyo xirfadlayaasha warshadaha filimada inay dadaalkooda u soo jeestaan ​​oo ay ku takhasusaan samaynta filimada dalxiiska.
Si loo soo jiito dareenka shirkadaha wax soo saarka filimada, warbaahinta, dalxiiska, iyo dadweynaha hal madal.
Si loo abuuro shuruudo loogu talagalay waxyaabaha xayeysiinta ah ee aadka wax ku oolka ah.
GTFF waxaa soo saaray dalxiiska Kanada iyo Mareykanka iyo hoggaamiyeyaasha warshadaha filimada kuwaas oo muujiyey sumcad caan ku ah Filimka iyo Dalxiiska oo ay ku jirto magacaabista guddiyada sharciyeynta ee filimka iyo dalxiiska.
Laga soo bilaabo horudhacyada adduunka ilaa xafladaha abaalmarinta, laga soo bilaabo baarisyada ilaa isku xirka warshadaha miraha leh, laga bilaabo tartamada ba'an ee ay wadaan garsoorayaasha caalamiga ah, kuwa ku hadla khudbadaha muhiimka ah, fursadaha lagu fulinayo baahiyaha kaqeybgalayaashu si ay si fiican u fahmaan ugana mid noqdaan isbeddellada ugu dambeeya ee sameynta filimada.
Qeybta dadweynaha, filimada iyo dalxiiska ayaa sidoo kale heli doona wararka gacanta ugu horreeya iyo macluumaadka mas'uuliyiinta dalxiiska caalamiga ah oo leh macluumaadka meesha ay ku xiran yihiin shineemada iyo filimka.
Ka sokow Xulashada Filimada Festifaalka, 2021 GTFF waxay siisaa marin-u-helis siminaaro warshadeed oo qoto-dheer iyo aqoon-isweydaarsiyo ay bixiyaan gurus warshadaha. Seminarrada loogu talagalay filim sameeyayaasha waxaa ka mid ah kor u qaadista raasamaalka wax soo saarka, faafinta filimka, qaybinta iyo aasaaska tuurista. Aqoon isweydaarsiyo hordhac ah oo daboolaya sameynta filimada, qorista shaashadda iyo waxqabadka kaamirada ayaa loo heli karaa bulshada filimka. Siminaarrada meelaynta ee Nederland iyo Guddiyada Dalxiiska Uganda hogaamin lahaa oo xiri lahaa dhacdooyinka macluumaadka.